Hoyga Wararka Marar | Qaybtii labaad dhacdadii 11- September 2001
Qaybtii labaad dhacdadii 11- September 2001
Dhacdadii 11 September.
Qayb kale iyo dhacdadii September, 11. 2001.
Subaxnimadii, 11-September.2001, saacadu markay ahayd 08:14.a.m ayaa diyaaradii labbaad ee la afduubi doona ay ka duushay, gegida diyaaradaha ee Logan International Airport, kuna yaala Magaalada Boston.
Diyaaradan oo usii jeeday, magaalada Los Angeles ee gobolka California, waxaa saarnaa 56 qof oo rakaab iyo shaqaale diyaaradedba isugu jira.
08;37. a.m, ayaa qolada diyaaradaha kala hagtaa ay waydiisay, Kabtankii diyaarada bal inuu arko, Flight 11, oo xiligaas iyana afduubnayd, ahaydna tii aynu shalay ka sheekeenayney? Kabtankii diyaaradu wuxuu ku soo warceliyay inuu arko Flight 11, ayna dhulka ka sareeyso 29,000 feet,.
Qoladii diyaaradaha Kala hageysey waxay kabtankaas u sheegeen inuu diyaaradaas ka fogaado, waayo waxaanu u malayneynaa in la afduubay.
Haddalkaasi wuxuu ahaa kii ugu danbeeyay ee Kabtankii iyo shaqaalihii diyaaradaas laga maqlo. 08.43. A.M ayay kooxii wax afduubeysey bilaabeen inay diyaaradaas afduubaan, waxaana Shidhkii diyaarada Xoog ku galay, labbada nin ee kala ah, Fayez Bani hammad iyo Mohand al-Shehri. iyagoo markiiba dilay labbadii duuliye ee diyaarada wadday oo la kala odhan jiray Victor Saracini iyo Michael Horrocks. taas oo u saamaxday inuu hogaankii diyaarada la wareego Marwan al-Shehhi.
Diyaaradan United Airlines Flight 175, tiraba labba jeer ayay ku sigatay inay jiidho diyaarado kale oo hawada ku jira. lakiin Kabtanadii diyaaradahaas kale wadday ayaa labbada jeerba ka dheeraday oo ka fogaaday. Mar waxay jiidhi gaadhay Delta Air Lines Flight 2315. markalena waxay jiidhi gaadhay oo ku dhici gaadhay . Midwest Express Flight 7.
Saacadu markii ay ahayd, 09:01.a.m, ayaa diyaaradaasi isku soo beegtay Daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga aduunka. Diyaaradan oo caalamka oo dhami daawanayo, oo tilifeeshinada si toosa looga wadda arko ayaa waxay ku dhacday, Taawarka Koonfureed ee xaruntii ganacsiga aduunka ee New York, loona yaqaanay WTC.
Diyaaradan oo sixun ugu dhacday, taawarkaas koonfureed ee Xaruntii ganacsiga aduunku, waxay sababtay, muda saacad ka yar inuu ku dumo, taawarkii ay ku dhacday, kaas oo dumay 09:57.a.m, saacada New York.
Waxaana burburka taawarkaas ku dhintay, dad kun qof kor u dhaafaya.
Shantii nin ee Diyaaradaas Af-duubay, waxay magacyadoodu kala ahayeen.
1.Marwaan Yusuf Maxamamed al-Shehhi. oo ahaa Kabtankii diyaaradaas la wareegay, markii la afduubay. wuxuu dhashay 9 .May 1978. wuxuuna ku dhashay Ras AL-khayma oo Imaraatka Carabta ah. 23 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 9.September.2001.
2. Fayis Binu Hamad, oo isna ka mid ahaa ragii afduubay diyaaradaas United Airlines Flight 175. wuxuu dhashay. March 19, 1977. wuxuuna ku dhashay Khor Fakkan, oo hoos tagta imaarada shaariqa ee Waddanka Imaaratka Carabta.. 24 jir ayuu ahaa markii uu dhintay 11.September.2001.
3. Muhanad Maxamed Al-Shehri. oo isna ka mid ahaa ragii afduubay diyaaradaas United Airlines Flight 175. wuxuu dhashay. August 17, 1979. wuxuuna ku dhashay Gobolka Asir ee waddanka Sucuudi Careebiya.
22 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 9.Sebtember.2001. (Ninkan iyo labbadii nin ee wallalaha ahaa ee ilma Al-shehri ee aynu shalay magacyadooda sheegayney, wax qaraabo ah maaha,ee magaca uun ayay waddaagan, waxayse ka yimaadeen isku gobol, oo gobolka Asir ee Sucuudiga ayay u wadda dhasheen.
4. Xamsa Al-Qamdi. oo isna ka mid ahaa ragii afduubay diyaaradaas United Airlines Flight 175. wuxuu dhashay November 18, 1980. wuxuuna ku dhashay Gobolka Al Bahah ee waddanka Sucuudi Careebiya. 20 jir ayuu ahaa markii uu dhintay 11.September.2001.
5. Axmed Al-Qamdi. oo isna ka mid ahaa ragii afduubay diyaaradaas United Airlines Flight 175. wuxuu dhashay July 2, 1979 wuxuuna ku dhashay Gobolka Al Bahah ee waddanka Sucuudi Careebiya. 22 jir ayuu ahaa markii uu dhintay 11.September.2001.
Labbadan nin ee ugu danbeeya, ee Xamse iyo Axmed Al Qamdi, waa wallaalo ruma.
Lasoco Qayb kale oo ka hadlaysa diyaaradii saddexaad ee wasaarada gaashaandhiga ee maraykanka ku dhacday/
W/Q. Suleyman Yusufdhakhtar.